Gabadhii ugu horreysay ee Soomaaliyeed oo Guddoomiye degmo ka noqotay UK iyadoo xijaaban - BBC News Somali
Gabadhii ugu horreysay ee Soomaaliyeed oo Guddoomiye degmo ka noqotay UK iyadoo xijaaban
Image caption Rakhiya waxay ku dhalatay Soomaaliya
Rakhiya Ismaaciil waxaa 16-kii bishan May loo doortay inay noqoto barasaabka degmada Islington ee Waqooyiga London.
Gabadhan oo ku dhalatay dalka Soomaaliya ayaa siyaasadda ku jirtay in muddo ah, waxayna golaha maamulka London kamid ahayd tan iyo sanadkii 2012-kii.
"Ma jiro qof kugu marti galinaya inaad ka qeyb qaadato, balse waa inaad adiga isxilqaanto , waxaana lagaa rabaa inaad fahanto sida go'aannada loo sameeyo, goorta la sameeyo iyo cidda sameysa intaba", ayey tidhi mar ay ka hadleysay khibradda maamulka.
Waxaa la aaminsan yahay in Rakhiya ay tahay haweeneydii ugu horreysay ee Jibaab xiran oo dalka Ingiriiska ka noqotay barasaab ama guddoomiye degmo.
Howlaheeda ayaa ku saabsan adeegyada shacabka, waxayna inta badan ka qeyb gashaa munaasabadaha dadweynaha, iyadoo u mataleysa golaha ay ka tirsan tahay.
"Waxay ila tahay tallaabadan ma aha mid aniga kaliya horumarkeyga ku saabsan, balse run ahaantii waa awood ay si gaar ah u heleen bulshooyinka laga tirada badan yahay ee ku dhex jira shacabka, sababtoo ah farriimaha aan ka helayo dadweynaha aad bay u faro badan yihiin".
Jaamacadda Minnesota ee waddanka Maraykanka waxaa lagu qabtay barnaamij is barbar dhig ah
Rakhiya oo wax ku baratay gudaha UK waxay xilal kasoo qabatay iskuulkii ay wax ka dhiganeysay, iyadoo markii dambena u xuub siibatay dhinaca siyaasada.
Wareysi ay BBC-da siisay ayey ku sheegtay in ay arrin aad u wanaagsan tahay in haweeney kasoo jeedda dadka laga tirada adan yahay ay siyaasadda qeyb ka noqoto.
"Waa muhiim in gabar midabkeedu madow yahay ay ku jirto siyaasdada, sababta ay taasi muhiimka u tahayna waa in go'aannada la sameeyo intooda badan aan ku matalo nafteyda iyo dadka kale ee madowga ah ee laga tirada badan yahay", ayey tidhi Rakhiya.
Soomaalida qurba joogta ah ayaa heerar kala duwan ka gaaray siyaasadda waddamada reer galbeedka ee ay ku sugan yihiin.
Sidoo kale haweenka Soomaaliyeed ee waddamadaas ku sugan ayaa si gaar ah saameyn weyn ku yeeshay siyaasadda.
Dalalka Mareykanka, UK iyo waddamo badan oo reer Yurub ah ayaa aqalladooda baarlamaanka iyo goleyaasha kale laga arkaa siyaasiyiin asal ahaan kasoo jeeda Soomaaliya, halka kuwo kalena ay u xusul duubayaan inay ka mid noqdaan.
Sanadkii lasoo dhaafay, Ilhaan Cumar, oo ah gabar kasoo jeedda Soomaaliya ayaa noqotay mid kamid ah ladii gabdhood ee ugu horreeyay ee Muslim ah oo ku biirtay aqalka Koongareeska Mareykanka.